Taorian'ny 5 taona ny fikarohana sy ny fampandrosoana, HeeChi Tech dia nahatratra ny fanatanterahana ara-teknika sy ny fipetrahan'ny 40 patanty amin'ny tsy mifandray fanafanana fitaovana fifohana sigara, ary manana ny fepetra fototra mba hamorona patent moat.
Manana tsiro mahazatra toy ny Original, Mint Blast ary Blueberry izahay, ary manana tsiro manokana toy ny Tangerine Peel Blast sy kafe ho an'ny safidinao.
PURE HeeChi Coffe, traikefa kafe madio.Mba hahitana ny hanitra kafe tsara indrindra dia nanandrana voan-kafe maherin'ny 30 avy amin'ny kaontinanta telo izahay, ary nifidy Geisha avy any Etiopia izahay.Favori VINA ara-bakiteny, manampy anao ho tony sy hanohy ny fiainana andavanandro.
Raha vao sambany ianao no nanandrana vokatra HNB dia azonao atao ny manandrana ny tsiro kafe.Satria ny ankamaroantsika dia hisotro kafe isan'andro, dia ho mora kokoa ny manaiky ny tsiro efa mahazatra.
Na dia nampiditra politikam-pandaminana momba ny sigara elektronika aza ny firenena samihafa, dia tsy mitsahatra ny hafanam-po amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny sigara elektronika.Ny fitomboana matanjaka amin'ny tsenan'ny sigara eran-tany dia vokatry ny fitomboan'ny faneken'ny mpanjifa ny vokatra e-sigara, ny hetsika ara-barotra mavitrika ataon'ny orinasa paraky, ary ny fanafainganana ny fanavaozana sy ny fivoaran'ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra sigara elektronika.
teo aloha: HEECHI Blueberry Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Manaraka: HEECHI Mint Blast Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Anaran'ny vokatra: HEECHI Coffee Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Fampiharana: Ampiasaina amin'ny fitaovana fanafanana hafanana tsy mandoro